24 Mgbe ụbọchị ise gafere, Ananayas+ bụ́ nnukwu onye nchụàjà bịara, ya na ndị okenye ụfọdụ, tinyere ọkà okwu ihu ọha, onye a na-akpọ Tetọlọs, ha wee kọọrọ+ gọvanọ+ akụkọ ọjọọ banyere Pọl. 2 Mgbe a kpọrọ Tetọlọs, ọ malitere ibo ya ebubo, sị: “Ebe ọ bụ na anyị nwere udo dị ukwuu+ site n’aka gị, ebe a na-enwekwa mgbanwe dị iche iche ná mba n’ihi ọchịchị ọma gị, 3 anyị ji obi ekele dị nnọọ ukwuu na-anabata ya n’oge niile nakwa n’ebe niile, gị Onye Ukwu+ Filiks. 4 Ma, ka m wee ghara igbukwu gị oge, ana m arịọ gị ka i jiri obiọma gị gee anyị ntị ná mkpirikpi. 5 N’ihi na anyị hụrụ na nwoke a bụ ajọ mmadụ,+ ọ na-akpalikwa ndị Juu niile nọ n’elu ụwa dum mmadụ bi imegide ọchịchị.+ Ọ bụkwa onye ndú nke òtù ndị Nazaret,+ 6 onye nwara imerụ ụlọ nsọ,+ onye anyị jidekwara. 7 * —— 8 Site n’ịgba ya ajụjụ, gị onwe gị pụkwara ịchọpụta ihe a niile anyị na-ebo ya ebubo ha.” 9 Mgbe ahụ ndị Juu sonyekwara n’ibo ya ebubo, na-ekwusi ike na ihe ndị a bụ eziokwu. 10 Mgbe gọvanọ ahụ kweere ya n’isi ka o kwuo okwu, Pọl zara, sị: “Ebe m maara nke ọma na ị bụ ọkàikpe nke mba a kemgbe ọtụtụ afọ, achọrọ m ịzara ọnụ m n’egbughị oge+ n’ihe e kwuru banyere m, 11 ebe ị pụrụ ịchọpụta na ọ karịbeghị ụbọchị iri na abụọ kemgbe mụ onwe m gbagoro Jeruselem ka m fee ofufe;+ 12 ha ahụghịkwa m n’ụlọ nsọ+ ka mụ na onye ọ bụla na-arụ ụka ma ọ bụ ka m na-eme ka ìgwè mmadụ gbakọta,+ ma ọ̀ bụ n’ime ụlọ nzukọ dị iche iche ma ọ bụ n’obodo ahụ dum. 13 Ha apụghịkwa igosi+ gị na ihe ndị ha na-ebo m ebubo ha ugbu a bụ eziokwu. 14 Ma ana m ekweta nke a n’ihu gị, na m na-ejere Chineke nke nna nna m hà+ ozi dị nsọ dị ka ụzọ ahụ ha na-akpọ ‘òtù’ si dị, n’ihi na m kweere ihe niile e kwuru n’Iwu+ ahụ nakwa ihe niile e dere n’Akwụkwọ Ndị Amụma; 15 enwekwara m olileanya+ n’ebe Chineke nọ, bụ́ olileanya nke ndị a n’onwe ha nwekwara, na a gaje inwe mbilite n’ọnwụ+ nke ma ndị ezi omume+ ma ndị ajọ omume.+ 16 N’ihi nke a, n’ezie, ana m adọgbu onwe m n’ọrụ mgbe niile ka m wee nwee akọ na uche dị ọcha+ nke na-adịghị emejọ Chineke na mmadụ. 17 Ya mere, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, abịara m ka m wetara obodo m onyinye ebere na àjà+ dị iche iche. 18 Mgbe m nọ na-eme ihe ndị a, ha hụrụ m n’ụlọ nsọ+ mgbe m meworo onwe m ka m dị ọcha dị ka iwu kwuru, ma ìgwè mmadụ agbakọtaghị, e nweghịkwa oké aghara. Kama e nwere ndị Juu ụfọdụ ndị si n’ógbè Eshia bịa, 19 bụ́ ndị kwesịrị ịnọ n’ihu gị ma bo m ebubo ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla ha pụrụ ịsị na m mere.+ 20 Ma ọ bụ, ka ndị nọ n’ebe a kwuo n’onwe ha ihe ọjọọ ha chọpụtara mgbe m guzo n’ihu Sanhedrin, 21 ma e wezụga n’ihe metụtara otu okwu a nke m tiri ná mkpu mgbe m guzo ọtọ n’etiti ha, ‘Ọ bụ n’ihi mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ ka a na-ekpe m ikpe taa n’ihu unu!’”+ 22 Otú ọ dị, ebe Filiks+ maara n’ụzọ ziri nnọọ ezi ihe ndị metụtara Ụzọ a,+ o yigharịrị ikpe ha wee sị: “Mgbe ọ bụla Laịsias+ bụ́ ọchịagha ga-abịa, m ga-ekpebi okwu ndị a metụtara unu.” 23 O wee nye onyeisi ndị agha ahụ iwu ka a kpọchie nwoke ahụ, ka o nwetụkwa ntụsara ahụ́ n’ụlọ mkpọrọ, nakwa ka ọ ghara inwe onye ọ bụla n’ime ndị ya ọ ga-amachibido ilekọta ya.+ 24 Mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, Filiks+ na Drusila nwunye ya, bụ́ nwaanyị Juu,+ bịara, o zikwara ka a kpọọ Pọl, o wee gee ya ntị n’ihe metụtara inwe okwukwe na Kraịst Jizọs.+ 25 Ma ka ọ na-ekwu okwu banyere ezi omume+ na njide onwe onye+ na ikpe+ nke na-abịanụ, Filiks tụwara ụjọ ma zaa, sị: “Gawagodị, mgbe m nwetakwara ohere kwesịrị ekwesị, m ga-ezi ka a kpọọ gị ọzọ.” 26 Ma, n’otu mgbe ahụ, ọ nọ na-atụ anya ka Pọl nye ya ego.+ N’ihi nke ahụ, o zigara ka a kpọọ ya ugboro ugboro karị, ya na ya na-enwekwa mkparịta ụka.+ 27 Ma, mgbe afọ abụọ gafere, Pọshiọs Festọs nọchiri Filiks; ma ebe ọ bụ na Filiks chọrọ inweta ihu ọma+ ndị Juu, ọ hapụrụ Pọl n’agbụ.